Caasimadda ah ee beelaha goboleedka Isbaanish. | eactivo | Isbaanish soo guurey
Tani jimicsi cusub oo ku saabsan Capital Isbaanish oo ka mid ah beelaha maamulka (CCAA)* dhammeeystiraa in waxaanu soo bandhigaynaa in November on Beelood Isbaanish, ¿Xukunkaasi?
Bishii November aad magaca CCAA ku bartay kula INTERACTIVO xujo iyo Photo Wakiilka.
Tani jimicsi dheeraad ah oo ku saabsan caasimadaha gobollada waa:
1. Baro magaca iyo meesha CCAA ah: dib u eegi la xujooyinka falgal.
2. Baro magacyada taajajkii of CCAA ah: listening to podcast a, isticmaalaya Internet weydiisanaya saaxiibo qon.
3. Sifooyinka Qaar ka mid ah dhaqanka ee gobol kasta: iyada oo Photos ay jecleyd ee CCAA
4. Barbardhig urur soohdimaha dalalka kala duwan: wadanka aad ula.
Target: dhamaadka waxaad ogaan doontaa sida dalka waa la soo abaabulay iyo qaar ka mid ah sifooyinka cajiib ah oo ah gobol kasta.
Jimicsiga**: Caasimada Spain
Khariidadda si print iyo jeeg: CCAA map leh caasimadaha
Layliyada waxaa loogu talagalay gaar ahaan kuwa ka socda si aad u codsatid Dhalashadiisa Isbaanish. Sida aad la socotaanba, baahnaan doontaa inaad gudubto imtixaanka leh su'aalo ku saabsan bulshada iyo Spain ee guud.
Wixii Wixii macluumaad on imtixaanka ee dhalashadiisa Isbaanish, noocyada su'aalaha, gargaarka, iwm: Guudmarka.
Wixii tusaalooyin free falgal iyo: Trial Free.
Tusaalayaasha kale ee Haddii aad qabto su'aalo ururisey dadka horay u sameeyaa baaritaanka: Tusaalayaasha kale ee su'aalaha.
Ha iloowin in aad soo dirto jimicsi shaqada guriga “Capital The” iyo wixii su'aalo ah oo kale oo laga yaabaa in aad haysato.
*CCAA = gobolada
** Gargaarka lacagta ee macalimiinta ah ee Isbaanish: Caasimada Spain for macalimiinta.
Published in: Cajalado, Ismaamul beeleedka, Jimicsiga B1, Jimicsiga B2, Isbaanish Pictures, Play